३ मिनेट मृ’त्यु भएपछि जे देखियो… डाक्टर परे च’कित - Sampurnab Khabar
३ मिनेट मृ’त्यु भएपछि जे देखियो… डाक्टर परे च’कित
४ कार्तिक २०७८, बिहीबार by सम्पूर्णव
विश्वभर सबैभन्दा बढी जिज्ञासा मृ’त्युबारे सोधिन्छ । मानिसको मृ’त्यु भएपछि के हुन्छ ? के मानिसको पु’न’र्जन्म हुन्छ कि मृ’त्युपछि मानिस अरू कुनै ठाउँको यात्रामा हुन्छ ? यस्ता प्रश्न मनमा न’उ’ब्जिने सायदै होलान् । तर, आजसम्म कसैले पनि यसको जवाफ दिन सकेका छैनन् । किनकि, मृ’त्यु त्यस्तो कुरा होइन जसलाई अ’नुभव गरि’योस् र मा’निस फेरि त्यसबाट फिर्ता भएर त्यसबारे बताओस् ।
तर, अमेरिकाको मि’सिसि’पीका एक व्यक्तिले मृ’त्युलाई जि’तेका मात्र छैनन्, उनले आफ्नो मृ’त्युको अनुभव पनि सेयर गरेका छन् । अझ अच’म्म त के भने यसरी मृ’त्युको अ’नुभव सेयर गरेका वा’ल्टर ‘स्नो बल’ वि’लि’यम्स’ले बताएका अनुभवचाहिँ चि’कित्स’कहरूले सत्य भएको पनि बताएका छन् ।
यो सन् २०११ को कुरा हो । ५७ वर्षीय विलियम्स ग’म्भी’र बि’रा’मी भएपछि अस्प’ताल भ’र्ना भए । जब उनलाई अ’प’रेस’नका लागि अप’रेस’न थिए’टर लगियो । उनमा अर्को स’म’स्या’ देखियो– हृ’दया’घा’त । त्यही समयमा अ’क्सि’जनको क’मीले उनको म’स्ति’ष्कले काम गर्न छाड्यो ।
मुटु तथा म’स्ति’ष्क दुवैले काम गर्न छाडेपछि चि’कित्स’कले उनको अ’परे’सन गरेनन्, उनलाई ‘मृ’त’ घोषणा गरिदिए ।तर, केही समयमा नै फेरि वि’लियम्स’ले आँ’खा खोले । होस’मा आएपछि उनले जे भने त्यसले त्यहाँका चि’कि’त्स’क पनि दं’ग परे । होसमा आएलगत्तै उनले दाबी गरेका थिए– मैले मृ’त्यु’को समय देखेको थिएँ । उनले यसो भन्दा त्यहाँ अस्पतालका चि’कि’त्सक मात्र होइनन्, न’र्सहरू पनि थिए । र, त्यो ३ मिनेटको म’र’णमा उनले जे देखेँ भनेका थिए, ती सबै स’त्य भएको ती चि’कित्स’क’ले बताएका छन् ।
यसअघि गरिएका रि’सर्च’हरूले दाबी गरेका छन्, मानिसले मृ’त्यु’पछाडि अत्य’न्त च’हकिलो प्रकाश देख्छ । तर, वि’लि’यम्सले चाहिँ प्रकाश दे’खेको बता’एनन् । उनले त आ’फ्नैव’रपर भएका विभिन्न कार्यहरू देखेको बताएका थिए । यसमा आ’श्च’र्यला’ग्दो कुराचाहिँ के हो भने उनले जे भनेका थिए, ती सबै सही थिए ।
उनले त्यहाँ चि’कित्स’कहरू’ले गरेको काम, न’र्सहरूले जे भनेका थिए, ती सबै कुरा भनेका थिए ।विलियम्सका अनुसार अस्प’तालका मेडिकल स्टाफ उनलाई झट्का दिइरहेका थिए । त्यहाँ दुईजनाको आवाज सुनेको वि’लिय’म्सले बताएका थिए । तीमध्ये एक महिला भएको र ती महिलाले उनलाई छ’तबाट बाहिर निकाल्न खोजेको पनि विलि’यम्सले थाहा पाएका रहेछन् ।
ती महिलाले आफूलाई कर गरेर बाहिर लै’जा’न खो’जेको विलियम्सले दाबी गरेका थिए । र, त्यसलाई त्यहाँ भएका अर्का पुरु’षले सहयोग गरिरहेको उनले बताए । अन्त्य’मा जब उनले आ’फू’माथि झ’ट्का लागेको थाहा पाए, तब आँखा खोले । ईताजा खबर डट कम मा खबर छ ।आँखा खोल्दा उनको अगाडि एक नर्स र अर्का एक व्यक्ति थिए । त्यहाँ भएकी ती नर्सले विलियम्सका सबै कुरा साँचो भएको बताएकी छिन् ।
Prevपानी पार्ने प्रणाली बाहिरियो, अब मौसममा सुधार आउने
Nextकठै ! यति सानो छोरोले गरे यसरी आफ्नोे बुवाको किरिया ,रुवाबासि (हेर्नुस् भिडियो )